Uyenza njani imibhalo engezantsi kwi-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani imibhalo engezantsi kwiYouTube?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 374
Sebenzisa imibhalo engezantsi yevidiyo ethunyelwe kuYouTube ilungile ngokuthe ngqo. Ukuba awukwazi ukuba ungayenza njani, ungakhathazeki. Siza kukufundisa yonke into malunga nesi sixhobo sinomdla esibandakanya iqonga levidiyo esasazwayo kwaye esivumela ukuba sijonge umxholo kolunye ulwimi.
Imibhalo engezantsi kwi-YouTube ayisebenzi ku Ukuqonda ezo vidiyo zikwezinye iilwimi kodwa zikwindlela engaqhelekanga kwabo banengxaki ethile yokuva. Namhlanje sikubonisa indlela elula neyona ikhawulezayo yokwenza lo msebenzi kwiPC okanye kwiAPP.
Kutheni imibhalo engezantsi ibalulekile kuYouTube?
Abasebenzisi abaninzi abakuqondi ukubaluleka kwemibhalo engezantsi kwiqonga leYouTube. Banokuba luncedo ngala maxesha xa sifuna ukudlala ividiyo ngolunye ulwimi okanye ngokulula xa sikwindawo enengxolo eninzi apho kungenakwenzeka ukuva umsindo wevidiyo.
Imibhalo engezantsi nayo ube yenye indlela ebalaseleyo Kula matyala apho sisezikhaleni apho isandi seevidiyo singenakho okanye singafanele ukuviwa ngevolumu ephezulu.
Nokuba siyintoni na isizathu, into ebalulekileyo yile I-YouTube isinika ithuba lokuvula imibhalo engezantsi. Inkqubo yokwenza lula ilula kwaye iyakhawuleza, kwaye eyona nto intle kakhulu kukuba siya kuba nakho ukuyicwangcisa kwiPC okanye nakwisicelo esiphathwayo.
Sebenzisa imibhalo engezantsi kwiPC
Ukwenza imixholo engezantsi kwiYouTube kwikhompyuter yethu Siza kufuna kuphela ikhompyuter enonxibelelwano lwe-intanethi. Akuyi kuba yimfuneko ukukhuphela ezinye usetyenziso okanye iinkqubo. Nanga amanyathelo ekufuneka siwalandele:
Vula I-YouTube kwi-PC yakho ngokungena Youtube.com
Khangela ividiyo ofuna ukuyidlala
Cofa kwi icon "ukuseta”Oko kubonakala emazantsi efestile yokudlala.
Cofa ku "Subtítulos"
Khetha Eyona ilunge ngakumbi ngokolwimi
Ilungile. Ividiyo ngoku iza kuvulwa imibhalo engezantsi
Kwimeko yokufuna cima imibhalo engezantsi Kwividiyo, kuya kufuneka uphinde inyathelo ngalinye kula manyathelo achazwe apha ngasentla kwaye sukukhangela ibhokisi "yemibhalo engezantsi":
Layita imixholo engezantsi kwisixhobo se-iOS
Inkqubo yokwenza imibhalo engezantsi evela kwisixhobo se-iOS nayo ilula. Ukuba awazi ukuba ungayenza njani, naka inyathelo ngenyathelo ekufuneka ulilandele:
Vula Youtube kwisixhobo sakho se-iOS
Iindawo kwaye udlale ividiyo oyithandayo
cofa ngaphezulu kwamachaphaza amathathu athe nkqo avela kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
Cofa apha iinketho zemibhalo engezantsi (CC) kwaye ukhethe olona lulunge ngakumbi ngokolwimi.
Sebenzisa imibhalo engezantsi kwi-app ye-Android
Ukusuka kwisicelo esiphathwayo sikaYouTube Kwi-Android kunokwenzeka ukuba wenze imibhalo engezantsi yayo nayiphi na ividiyo:
Khangela kunye kuvelisa ividiyo oyikhethayo
cofa ngaphezulu kwamanqaku amathathu athe nkqo (kwikona ephezulu ngasekunene)
1 Kutheni imibhalo engezantsi ibalulekile kuYouTube?
2 Sebenzisa imibhalo engezantsi kwiPC
3 Layita imixholo engezantsi kwisixhobo se-iOS
4 Sebenzisa imibhalo engezantsi kwi-app ye-Android
Uyenza njani ibhena yeYouTube?
Uyisebenzisa njani imo ye-incognito yeYouTube?